चुनाउ प्रचारमा उत्रिन बङ्गालकी मन्त्री डा. शशि पाञ्जा - खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङचुनाउ प्रचारमा उत्रिन बङ्गालकी मन्त्री डा. शशि पाञ्जा
‘बिजेपीसित उनीहरूको साँठगाँठ छ, खै त बिजेपीसित मिलेर पहाडको विकास गरेको?,’ उनले थपिन्, ‘न बिजेपीले न मोर्चाले कोही पनि पहाडको विकासको पक्षमा छैनन्। यसकारण विकासको निम्ति कालेबुङको जनताले तृणमूल कङ्ग्रेसलाई जिताउने विश्वास हामीले राखेका छौँ। तृणमूल कङ्ग्रेस अनि गोरामुमो उम्मेदवारहरूको निम्ति भोट अपील गर्न म कालेबुङ आइपुगेकी हुँ।’
तृणमूल कङ्ग्रेस अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नगरपालिका उम्मेदवारहरूको निम्ति भोट अपील गर्न पश्चिम बङ्गाल समाज कल्याण एवं आइसीडीएस मन्त्री डा. शशि पाञ्जा आज कालेबुङ आइपुगिन। उनी सोझै 10 माइलस्थित हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय पुगिन्। त्यहीँ नगरपालिका चुनाउलाई लिएर उनले उम्मेदवार अनि कार्यकर्ताहरूसित बैठक गरिन्।
बैठकपछि उनले वार्ड न ६, ७, ८, अनि ११-को पनि भ्रमण गरिन्। भ्रमणक्रममा हातजोडेर उनले जनसाधारणलाई तृणमूल कङ्ग्रेस अनि गोरामुमो उम्मेदवारहरूको पक्षमा भोट हाल्ने अपील गरिन्।
हिल तृणमूल महिला अध्यक्ष शिखा राई लगायत तृणमूल कार्यकर्ताहरूसित मिलेर उनले तृणमूल र गोरामुमोको निम्ति भोट मागेकी हुन्।
‘मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाडमा वेहद माया गर्छिन्। पहाडको विकासकै निम्ति उनले जीटीए पनि दिएका हुन् तर विमल गुरूङहरूले चलाउन सकेनन्,’ मन्त्री डा. शशि पाञ्जाले भनिन्, ‘विभिन्न बोर्डहरू पनि विकासकै निम्ति दिएकी हुन्। नगरपालिकामा तृणमूललाई जनताले जिताए कालेबुङको विकास गर्नेछौँ।’
यता विमल गुरूङले नगरपालिका चुनाउलाई ‘बङ्गाल बनाम गोर्खाल्याण्ड’ भनिरहेको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा उनले विमल गुरूङहरूले 2014 मा पनि गोर्खाल्याण्डको नाममा नै भोट मागेको तर जितेपछि केही नगरेको आरोप पनि लगाइन्।
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (19,556)